डम्बर डुबाउने समाचार गलत रहेको ‘रिपब्लिका’द्वारा स्वीकार, सम्पादकले मागे माफी – MySansar
डम्बर डुबाउने समाचार गलत रहेको ‘रिपब्लिका’द्वारा स्वीकार, सम्पादकले मागे माफी
Posted on June 8, 2019 June 8, 2019 by Salokya
त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र विभागका प्रमुख डम्बर चेम्जोङको नियुक्ति नियमविपरीत रहेको समाचार गलत रहेको अङ्ग्रेजी राष्ट्रिय दैनिक रिपब्लिकाले प्रकाशित गरेको तीन दिनपछि स्वीकार गरेको छ। यसका सम्पादक सुभाष घिमिरेले माफी माग्दै न्युज भेरिफिकेसन प्रोसेस अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।
रिपब्लिकाले बुधबार (५ जुन, २०१९) मा पहिलो पेजमै छापेको समाचार ‘TU appointed lecturer against age bar’ शीर्षकको समाचार तथ्यगत रुपमै गलत रहेको बारे बिहीबार राति माइसंसारले ब्लग लेखेपछि शुक्रबार मौन रही शनिबारको पत्रिकामा गल्ती स्वीकार गरिएको हो। रिपब्लिकाको अनलाइनमा शुक्रबार गुपचुप डिलिट गरिएको समाचार लिङ्कमा पनि शनिबार बिहान गल्ती स्वीकार गरिएको समाचार अपडेट गरिएको छ।
तर नेपाली भाषाको वेबपोर्टल नागरिकन्युजमा भने न भूल सुधार छापिएको छ, न माफी मागिएको छ। बिहीबार नागरिकन्युजमा ‘उमेरहद नाघेका व्यक्तिलाई त्रिविमा स्थायी नियुक्ति !’ शीर्षकमा सोही अङ्ग्रेजीमा छापिएको समाचारको नेपाली अनुवाद डकुमेन्टसहित प्रकाशित थियो। अहिले त्यो समाचार अनलाइनबाट गुपचुप गायब गरिएको छ।
नागरिकको अनलाइनमै काम गर्दाताका एक पटक प्रकाशित समाचार हटाउन नहुने, हटाउनै परे कारणसहित राख्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत बारे तथ्यसहित बुझाउँदा एमडी विनोदराज ज्ञवालीसमेत सहमत भएको हिजोजस्तै लाग्छ। त्यसपछि अनलाइनमा कुनै समाचार डिलिट गर्न कसैले दबाब दिएको थाहा पाइएको थिएन। अहिले शायद् अनलाइनमा त्यस्तो दबाब थेग्न सक्ने कोही भएनन्।
खोज पत्रकारिता हैन
ट्विटरमा मैले प्रमाणहरुसहित राखेर लेखेको ब्लगलाई कसैकसैले खोज पत्रकारिता भनेर प्रशंसा गरेको पनि देखेँ। अहँ मेरो नाक फुलेको छैन। त्यो खोज पत्रकारिता थिएन भनेर मलाई राम्रैसँग थाहा छ। यो एउटा सामान्य फ्याक्ट चेकिङ मात्रै थियो।
डम्बर सरलाई त मैले अहिलेसम्म भेटेको पनि थिइनँ। बरु रिपब्लिकाका सम्पादक सुभाष घिमिरेसित बेलाबखत कुरा हुन्थ्यो। नेपालको पत्रकारिताको एक किसिमको सिन्डिकेट तोडेर सम्पादक भएकोमा उनलाई उनकै मिडिया हाउसभित्रका सहकर्मी र बाहिरकाले के कसरी पेल्थे, हेप्न खोज्थे- त्यो मलाई राम्रैसित थाहा छ। उनको चरित्र हत्या हुने गरी उनकै सहकर्मीहरुले साप्ताहिक पत्रिकाहरुमा के कस्तासम्म समाचार लेखाए, त्यो पनि मैले हेरेको, पढेको हुँ। त्यसैले मलाई लागेको थियो- सुभाषले गल्ती गरेका छैनन्।
बिरामी भएर घरमै आराम गरिबसेको हुनाले मलाई यो विषयमा धेरै थाहा पनि थिएन। तर ट्विटरमा डम्बर सर र रिपब्लिका सम्पादकको जुहारी चलेको र अरुले पनि त्यसमा बोलिरहेको देखेर मलाई चासो लाग्यो यो विषय। खास कुरा के हो त? डम्बर सर यो यो गल्ती भयो है भनेर औँल्याउन खोजिरहेका थिए, पत्रकार चाहिँ आफूले सही समाचार छापेकोमा विश्वस्त थिए।
कुरा कहाँनिर बिग्रियो त?
डम्बर सर डकुमेन्ट हेर्न आउन बोलाउँदै थिए, पत्रकार हामी हाम्रै समाचारमा विश्वस्त छौँ, तपाईँको कागजात भए हाम्रो अफिसमा ल्याउनुस् भन्दै थिए।
मलाई लाग्यो, के रहेछ त्यो कागजात? हेरौँ न त।
ट्विटरकै डिएममा डम्बर सरसित कुरा भयो। मोबाइल नम्बर लिएँ। सरले डकुमेन्ट हेर्न उहाँकै अफिसमा डाक्नुभो। गएँ। हेरेँ, बुझेँ।
गरेको यत्ति हो। यो खोज पत्रकारिता हैन, स्रोतलाई एक पटक भेटेर कुरा बुझेको मात्र हो। भेटेर मात्र के कुरा बुझिन्थ्यो- पटक पटक फोन पनि गरियो। एक पटक त डम्बर सरलाई दिक्क लागिसकेको जस्तै सुनिएको थियो- यसलाई के भन्छ भाइ खोज पत्रकारिता हो? उहाँले हाँसेर सोध्नुभएको थियो। मैले हाहा गरेर हाँसेर टारेँ।
त्यसपछि मैले सुभाषलाई तपाईँहरुले सबै फ्याक्ट चेक गर्नुभएको हो भनेर सोधेँ। उनले आफूहरुसित सबै डकुमेन्ट रहेको र त्यसलाई चेक गरेको बताए। मैले ब्लग लेख्न लागेको जानकारी दिएपछि उनले समाचार लेखक विष्णु अर्यालसित कुरा गर्नुस् भनेर मोबाइल नम्बर पनि दिए। उनीसित पनि कुरा भयो। दुई पक्षको कुरा सुनेपछि कहाँनिर के चुकेको प्रष्टै भएँ।
त्यसपछि लेखियो ब्लग – डम्बरलाई डुबाउन खोज्दा यसरी चुके ‘रिपब्लिका’ र ‘नागरिक’ : एक लेक्चररलाई नगरेको ‘अपराध’को ‘सजाय’?
सामाजिक सञ्जालमा धेरै सेयर भयो।
अन्ततः शनिबार गल्ती स्वीकार गरेर माफी पनि मागे सुभाषले। याद गर्नुहोला, डाक्टर भक्तमानको अपहरण माओवादीले गरेको झुटो समाचार लेखिएकोमा पत्रकार र सम्पादकले अहिलेसम्म माफी मागेका छैनन्, रस्सेन्द्र भट्टराईको बारेमा ठूलै गफ लगाएर छापिएको एङ्कर न्युज गलत भएको ठहर भइसक्दा पनि लेख्ने र छाप्नेले अहिलेसम्म माफी मागेका छैनन्।
अग्रजहरुको यस्तो विगतका बीच गल्ती स्वीकार गर्ने आँट गर्ने रिपब्लिका सम्पादकको समर्थनमा छु म। काम गर्दै जाँदा गल्ती हुन्छ। गल्ती स्वीकार्नु र त्यसबाट सिकेर आइन्दा गल्ती हुन नदिने प्रतिवद्धता ठूलो हो। माफी माग्ने र माफी दिने दुई जना सहमत भइसकेपछि अरु तमासेहरु उफ्रिएर केही हुन्न।
यस्तो छ माफीनामा
के छ विदेशमा चलन?
3 thoughts on “डम्बर डुबाउने समाचार गलत रहेको ‘रिपब्लिका’द्वारा स्वीकार, सम्पादकले मागे माफी”
Maafi maage pachi sakyo ta?? K Nepal maa patrakaar kanoon vanda mathi nai ho ta… samachar lekhne naam maa j sukai gare pani kanoon sajaya nahune raicha…
राम्रो खाेज गरेर समाचार विश्लेषण गर्नुभएको रहेछ। नेपालमा यसरी उदाहरण पेश गरेर पत्रकारहरुलाई आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्न र सूचना तथा समाचार सच्याउन शिक्षा मिल्छ।
LeaveaReply to विकल्प Cancel reply